घर युरोपियन स्टार मासुसा सिस्कोको बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जसले सबै भन्दा राम्रो नाम "DIY"। हाम्रो मासु Sissoko बचपन स्टोरी प्लस अनर्थल्ड जीवनी तथ्यहरूले तपाईंलाई बचाउनु भएको घटनाको पूर्ण खाता तपाईंको बचपनको समय सम्म। विश्लेषणमा उहाँका बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, सम्बन्ध जीवन, र धेरै अन्य बन्द-पिच तथ्याङ्कहरू (सानो चिन्ता) भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक राम्रो गोल मिडफिल्डर हो तर केवल केहि केहि हाम्रो मासु Sissoko को बायो मा विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक र पारिवारिक जीवन
मसूसा सिस्कोको अगस्तको 16th मा, फ्रान्सेल ले ब्लान-मेसेनिल, फ्रान्समा 1989 मा जन्मिएको थियो। उनले मालेन सभ्यताको आमाबाबुलाई जन्मेका थिए जसको बारेमा केहि थाहा छ। Sissoko आमा एक गृहिणी हुनुहुन्थ्यो जबकि उनको बुबा उनको जन्मको समयमा एक निर्माण कार्यकर्ताको रूपमा काम गरे।
सेस्को तीन छोराछोरीको साथ चार छोराछोरीको जेठोको रूपमा जन्मेका थिए। ले ब्लान्क-मासिनल मा बढ्दो युवा सिसोको जुनूनको साथ फुटबल खेल्न सक्रिय रुपमा सक्रिय भएको थियो र त्यसको शुरुवात शुरु भयो कि खेल भविष्यमा उनको लागि राम्रो स्टक हुनेछ। तिनका शब्दहरूमा
"मैले चाँडै सोचेको थियो कि फुटबलले मलाई राम्रो जीवन पाउन सक्छ"।
आफ्नो आमाबाबुले पनि साझा गरेको विश्वासमा विश्वास गरिरहेको थियो, यिन सिस्कोको फुटबलमा क्यारियर निर्माण गर्न को लागी थियो जुन उनी एक युवा क्लबमा एस्परान्स अलेनीमा भर्ना भएको थियो जब उनी केवल6थिए। Esperance Aulnay नजिकैको युवा आधारित क्लब हो अलेनी-सोस-बोइस, उत्तरपूर्वी पेरिसमा एक उपनगर।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -क्यारियर बिल्डअप
Sissoko आफ्नो जीवन को एस्परेंस अलेन को अर्को तीन वर्ष को प्रतिबद्ध गरे जहां उनले बेहतर दिनों अगाडी आत्म-प्रेरणा संग जोश को साथ फुटबल खेलयो। त्यसपछि त्यसपछि, प्रशिक्षकको निरीक्षण पछि क्लबमा हप्तामा तीन पटक तिनले प्रशिक्षित गरे Adama Dieye, जो अब क्लबको लागि एक संवाददाताको रूपमा कार्य गर्दछ futsal टोली। Sissoko आफ्नो Diet को विकास मा महत्वपूर्ण गुरु को रूप मा वर्णन गर्दछ;
"म यहाँ हुँ किनभने यसको आज"
तिनको जवान क्लबको क्यारियरले प्रगतिशील मोड लिएका थिए जब उनले रेड स्टार पेरिसमा एक सिजन-लामो स्टन्टमा प्रवेश गरे। यो रेड स्टारमा थियो कि Sissoko प्रभावकारी प्रदर्शनहरू राख्नुभयो जसले उनलाई ट्लोउउजलाई उत्प्रेरित गर्यो जहाँ उनले पहिलो जीवनलाई फुटबलमा राम्रो जीवन बिताए।
हरेक खेलमा राम्रो खेल्नको लागि सजिलो सिसोकोले विभिन्न स्तरहरूमा आफ्ना प्रबन्धकहरूलाई मात्र प्रभाव पारेको थिएन तर क्लबको पङ्क्तिमा गुज्र्यो।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
यो टोउउउजमा रहेको थियो कि Sissoko ले 2007 मा पहिलो च्याम्पियंस लीग बनायो। उसले धेरै प्रभाव पारेको थियो र निम्न सिजनलाई बोलाइयो। पुनः-कल अपले उनलाई यूईएफई यूरोपा लीगमा खेल्न योग्यता सहित अन्य अवसरोंको बीचमा धेरै पुरस्कार नामांकन प्राप्त गर्यो।
यस वर्ष 2009 मा टोटेनहेम होट्सपेजको रुचि र लामो समय अघि यो चाहेको थिएन, साथसाथै मैनचेस्टर सिटी, इन्टर मिलानो, जुभरेस र जर्मनीका ब्यायन्स बेबेन म्यूनिखका पछिल्ला चासोहरू उनलाई फ्रान्सेली फुटबल बाहिर लोकप्रिय बनाइदिए। यद्यपि उनको क्लबको अनिश्चितताको कारणले गर्दा उनको चालले कुनै पनि सामग्रीलाई सन्तुलित पार्न सकेको छैन, सिसोको अन्तमा एक्सएनएनक्सक्समा नयाँ क्यासलको लागि छोडिन्छ।
31 अगस्ट 2016 मा, Sissoko को लागि साइन अप टोटेनहम होट्सपुर एक पाँच वर्षको सम्झौतामा, £ 30 मिलियन को लागी। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
Moussa Sissoko धेरै फुटबलर्स मध्ये एक छ जसले आफ्नो निजी जीवन निजी राख्न, सामाजिक मीडिया प्रयोगकर्ताहरु र प्रेस को pose नाक देखि प्यार गर्दछ। तथापि, त्यहाँ कुनै इन्कार गरेको छैन कि उनको हृदयघातको बारेमा कसलाई थाहा छ।
Sissoko ले एक प्यारा फ्रान्सेली महिला बनाएको छ जसलाई मैरीलुउ सिडिबे भनिन्छ (सम्बन्धित छैन Djibril Sidibe)। जो जोडी विवाहित छैनन् उनीहरु लाई सार्वजनिक रडार को बाहिर रहन को लागि संभव सबै भन्दा राम्रो प्रयास गर्नुहोस। तिनीहरू असंख्य चीजहरूसँगै एकैसाथ भेटिएका छन् र केवल फोटोहरू रिलीज गर्छन् जुन तिनीहरूका विभिन्न सवारीहरूमा घुमाउँदा तिनीहरूको गोपनीयताको आनन्द लिन्छन्।
यद्यपि, मसा एसिसकोसँग एउटा6वर्षीय छोरा (यो पदको समयमा) काई नाम गरिएको छ।
काईको आमाको बारेमा सानो कुरा थाहा छ जुन एक पटक उनको छोरा हगिंगलाई अप्रिल एक्सएनएनएक्समा नयाँ क्यासल र मैनचेस्टर बीचको खेलबाट क्यान्सर रोक्न देखा पर्यो।
Sissoko यो आफ्नो छोरा संग उनको सम्बन्ध को बारे मा भन्न को लागि छ:
"मेरो छोरा को मेरो काम बुझ्न को लागी पर्याप्त छ, जब उनले मलाई एक स्टेडियम मा, टीवी मा या एक विज्ञापन मा देख्यो, त्यो पागल हो (मुस्कुराहट) .त्यो धेरै गर्व छ त्यो उनको सहपाठीहरु को लागि पनि जब उनि स्कूल जान्छ भनिन्छ कि उनको पिता फ्रान्स र न्यु क्यासल टिमका लागि खेल्छ "।
जस्तै पहिले, मसा एसिसको छोरा र Rafa Benitez जस्तो कि तल फोटोमा देखेर धेरै नजिकको सम्बन्ध जस्तो देखिन्छ।
कस्ता धेरैले "एक रणनीति"द्वारा खेले Rafa सिसोकोले टीएनएनएमएक्सको टाइटनमको लागि क्लब छोडेर रोक्न सकेन।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -संगीत र हास्य स्वाद
Sissoko साबित गरेको छ कि एक फुटबलर को जीवन बिल्कुल फुटबल को आसपास घुमावदार छैन। यो कमेन्ट क्यारेक्टरका लागि उनीहरूको प्रेमले उदाहरणीय छ, विशेषगरी सुपर हीरो "कोरस"र"माकुरा मानिस"डीसी र मार्वल कमिक्स को क्रमशः।
यो त्यहाँ अन्त छैन, त्यो फ्रांसीसी संगीतको प्रेमी हो। Zaz, र अमेरिकी हास्य अभिनेता जिम केरी द्वारा खेलाएको हास्यपूर्ण भूमिका को लागि एक चीज छ जस्तै "ब्रूस सर्वशक्तिमान"साथै"गूंगा र डम्बर"। कसले सिसाको मसासालाई सोच्न सक्थ्यो, पिचमा गम्भीरतालाई उजागर गर्दा पनि बच्चाको हृदय र राम्रो संगीतको लागि स्वाद हुन सक्छ।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
मसासा सिसोकोको व्यक्तित्व अफ-पिचको सन्दर्भमा, उहाँले एक पटक भन्नुभयो।
"म सधै विवेक, सुरक्षित र सम्मानित छु। यो आवश्यक भएमा बोल्नु भन्दा मलाई रोक्दैन।
अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा उनको व्यावसायिक स्थितिको बावजूद, मसा अरूलाई भन्दा बढी महसुस गर्दैन। त्यो एक जस्तै छ गृह पक्षी जो शायद नै बाहिर जान्छ तर फिलिमहरु हेर्दै, आफ्नो छोरा संग खेल्दै र साथीहरु वा परिवारलाई हेर्दै।
त्यसपछि उनको पड़ोस (अलेनी-सोस बोइस) मा, मसाले लगभग सबै उपनामहरू थिए। आदर्श रूपमा, तिनले जवान हुँदा चीजहरूसँग टिंकरलाई माया गर्थे। यसले उसलाई उपनाम "DIY" कमायो।
"यो सुन्दर हास्यास्पद छ कि मानिसहरूले अझै मलाई फोन गर्छन्। म यसलाई राम्रोसँग लिन्छु। यसले मलाई हाम्रो सानो बच्चाको सपना सम्झाउँछ। साथीहरू हेर्नका लागि सधैँ राम्रो छ र तपाईले कहाँबाट आएको बिर्सनु भएको छैन। आज, म धेरै कम 'DIY' गर्छु। मसँग पर्याप्त समय छैन र म पहिले नै एकत्रित फर्नीचर किन्न चाहन्छु, यो सजिलो छ। "
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -XNUM अन्य रूचियाँ
Sissoko भिडियो गेमहरू र स्विमिंग प्ले गर्न माया गर्दछ। उहाँ विशेष गरी अडिट, रेंज रोवर्स, बीएमडब्ल्यू र मर्सेको प्रेमी हुनुहुन्छ जसले आफ्नो गेराजलाई सजावट गर्दछ।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -नेतृत्व कौशल
सन्साको त्यसपछि न्यूकैसल कोच, नील क्यामरूनले जन्मेका नेतालाई विचार गरे। यसअघि कोचले अघिल्लो कप्तान पछि सिसाको एक कप्तानको आर्मब्यान्डलाई पराजित गर्यो फैब्रिकियो कोलोनी एक चोटले गर्दा एक झटका सामना गर्यो।
न्यूसेल मा आफ्नो दोस्रो सीजनमा सिसाको थियो अचम्मलाग्दो जिम्मेवारीको साथ अचम्म लाग्दो थियो तर उनको कोचको विश्वासलाई कहिल्यै धोका दिईन किनभने उनीले राम्रोसँग आफ्नो टोलीलाई अंग्रेजी फुटबलको केहि ठूलो टोली विरुद्ध म्याग्दीमा महत्वपूर्ण अंक हासिल गर्न सफल भए। तथापि, न्यूजलले त्यो सीजनको पुनरावृद्धिमा खसेज गर्न रोक्ने पर्याप्त थिएन।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -बिहिन
Sissoko सफा स्लेट खेलाडी होइन रयान गिग्स र एन्ड्रेस इनिस्टा थिए। Sissoko सावधानी को आफ्नो निष्पक्ष साझा एकत्र र पीला पीला थियो धेरै पल्ट। उनले खेलको अन्तिम 15 मिनेटको लागि आउँदै गरेको अगस्त एक्स्ट्रायन्स एक्सएनएनएक्सएक्स लिभरपूलको विरुद्धमा उनको यूईईए च्याम्पियन लीगमा पहिलो जेले कार्ड प्राप्त गर्यो।
डिसेम्बर 2013 मा, Sissoko संग आफ्नो पहिलो अनुशासनात्मक मुद्दा अंग्रेजी फुटबल एसोसिएशन संग लटका थिए रेफरी माइक जोन्स अनुहारमा।
यो तथापि 'आकस्मिक', यो दक्षिणमाप्टनको गोर्खापट्टिबाट हटाउन खोज्दै गर्दा मात्र भयो।
मसासा Sissoko बचपन कथा प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -शेफ Sissoko
के कसैले कहिल्यै भान्सामा फुटबलर जीवनलाई सोचेको छ?
खैर, मसासा सिस्कोको टोटेनहम ताराहरू मध्ये एक हो जसले एआईए र होट्सपुर टिभी शोसँग स्वस्थ जीवनमा चित्रण गरेको छ।
शो मा, मसासा Sissoko र ह्यूगो लेलोरी सेलिब्रेटी शेफ जेरेमी पन्ग र स्पर्स पोषण विशेषज्ञ हन्ना शेर्देनले निर्देशित गर्दै दुई खेलाडीको रूपमा प्रख्यात फ्रिड चावल र थाई ग्रीन क्री पकाउन सर्वोत्तम प्रयास गर्छन्।
त्यो कसरी स्वाद छ, कुनै पनि थाहा छैन, तर यो पक्का राम्रो देखिन्छ। उनको पाक कलाको खाँचोमा, मसा एसिसको फ्रान्सेली व्यञ्जनहरु र इटालियन व्यंजनहरूको प्रेमी हो। फास्ट फूडको लागि, उसले पेपेरोन पिज्जाको स्वाद पाउँछ।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मासु Sissoko बचपन स्टोरी प्लस अनौपचारिक जीवनी पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी राख्नुहोस् वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् !.
सेप्टेम्बर 1, 2018